Uwe ejiji ndị inyom - ogologo, mkpụmkpụ, okpomọkụ, ọkụ, na isi ísì, uwe, uwe, na mpempe akwụkwọ, bọtịnụ, viscose, owu, silk, wafer, otu esi ahọrọ?
Ụlọ nwanyị na - akwa mma - nhọrọ mara mma maka ụdị ọ bụla
Ulo ejiji nke ndi nwanyi nke oge ohuru bu ihe puru iche na ihe ndi omenala nke gaghi arapu nwanyi nile. N'ọtụtụ nhọrọ ndị a chọrọ, a na-enye site n'inwe ndị na-emepụta ejiji eji eme ihe, ọbụna ndị na-achọ ụdị fashionista ga-enwe ike ịhọrọ ọtụtụ ụdị ụdị.
Kedu otu esi ahọrọ akwa uwe ejiji n'ụlọ?
Uwe ejiji ejiji bụ àgwà nke uwe ejiji ụmụ nwanyị , nke kwesịrị ịdị mma nke na ụmụ nwanyị nwere ike inwe ahụ iru ala ma dị mma na ya. N'iji ọchịchọ obi nke nwa agbọghọ ọ bụla chọọ ileba anya n'ụlọ, ọ dị mma ka o kwekọọ n'ọnọdụ niile kachasị ọhụrụ. Ya mere, ndị a ma ama na ndị na-eto eto, ma nke a maara nke ọma, gunyere uwe maka ụlọ na nchịkọta oge ha.
Kedu ụdị uwe ejiji ndị inyom na-emekarị, site na ihe ndị dị aṅaa ka ha na-ese, oleekwa otú ndị na-emepụta si eji ha chọọ mma?
Ihe ndị na-adọrọ mmasị na nkedo ma ọ bụ bọtịnụ, ndị e ji emepụta akwa: ákwà linin, owu, viscose, flannels na flannels, uwe elu uwe dị mkpa.
Terry na akwa efere dị iche iche dị iche iche na mmetụta nke isi ísì.
Ihe eji egwu oge - silk mara mma, mmachi, velor na guipure ngwaahịa, na belt, eriri nke deuce, ejiji gowns, gowns nke dị iche iche ogologo.
Ihe ndozi: ejiji, egwuregwu nke agba dị iche iche, nbipụta, ihe ntinye oghere, akpa na mkpocha isi.
Ụmụ nwanyị na-akwa iko, ndị owu
Kedu uru nke ụlọ ezumike mere uwe mwụda nke ihe onwunwe? Nke mbụ, ọ naghị ekpo ọkụ na okpomọkụ iji rụọ ọrụ ụlọ, ma ọ bụrụ na ụdị ahụ na-enye ohere, dịka ọmụmaatụ, enwere mpempe, ma ọ bụ uwe a bụ uwe, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịpụ elu n'okporo ámá maka otu nkeji ịzụta nri ma ọ bụ wepụ ihe mkpofu. Nke abuo, umunwanyi umuaka umuaka umuaka kariri ihe si na silk, flax ma obu akwa ndi ozo.
Ndị enyi enweghị ike ịgbanwe ụdị uwe ha na-ahọrọ, ha nwere ike ịchọta uwe elu nke ụmụ nwanyị, si na cathon ma ọ bụ denim, na nke mbụ na-edozi ahụ, ihe ndị a na-eme ka a na-atụgharị ya, ịkwanyere onwe ya, ịkwanye azụ na ogologo oge. O nwere ike ịbụ: mgbakwasa na akwafans, bohos , ethno na vintar variants, ma na ụkpụrụ na nkwekọrịta, na-enweghị ha.
A na-eji ejiji nke viscose eme ụlọ
Ụdị ndị a na-eme n'oge a bụ nke ndị na-emepụta ihe, nke mere na ọmarịcha mma nke afọ na ọgbọ dị iche iche na-enwe mmetụta dị ka ụmụ nwanyị ọ bụghị nanị n'ụbọchị ezumike, kamakwa n'ime ụlọ obibi dị mma. E gosipụtara ihe ngosi ahụ:
ụdị mpempe akwụkwọ na-acha ọkụ na nke na-efe efe n'elu ala, na-atụgharị anya uwe ndị ọzọ na-emekarị-uwe;
Egwurugwu ogologo na obere, na-edozi ejiji ejiji, nke nwere ike ịghọ isi ihe dị mma maka ịmepụta ihe oyiyi maka ezumike ezumike ezumike;
naanị ụlọ ezigbo nlekọta.
A na-eji uwe na-ekpuchi ndị inyom
Ejiri uwe siliki nke ulo Chic nwere ike inwe obere, midi na maxi, si na silk ma ọ bụ satin silk, ya na ísì kachasị mma maka ebe obibi. Ụdị ọ bụla na-eme ka ahụ dị jụụ, ma dị mma, ọ bụ ihe dị oke ọnụ karịa na owu na viscose. Enwere ihe ngwọta na mma akwa, ụfọdụ ụdị nwere ihe eji akpa ákwà, ihe ntinye mmasị ma ọ bụ si na silk na mgbakwunye nke ihe ndị na-egbuke egbuke. Ụdị dị mma: bat, nke na-esi ísì na isi, na uwe mgbokwasị silk bụ ihe ndabere dị mma maka ụta kwa ụbọchị .
Ụmụ nwanyị na-akwa iko
Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ ịbịa n'ụlọ n'ehihie oyi na-atụ oyi ma tinye akwa uwe eji ekpo ọkụ nke kachasị amasị gị, karịsịa mgbe ịsa ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ dị jụụ, ma nọdụ ala na iko tii na-esi ísì ụtọ n'oche. Uwe ejiji ejiji nke ndi nwanyi mara mma bu ihe di nma, obi oma na ngbapu na nsogbu nile nke ubochi ugbua ga-efepu onwe ha n'otu ntabi anya. Ha na-achọ n'ihi na ha dị mma nke ọma, ngwaahịa dị ogologo na ihe nke oge elekere na ísì na-ejikọta ya na nkwonkwo elu dị elu.
Ụmụ nwanyị na-eji ejiji akwa ejiji
Nwanyị mara mma na-eyiri ihe dị iche iche na-adọrọ mma mgbe niile, ihe ndị dị otú ahụ anaghị edochi anya na nkwari mmiri na mgbe ị na-eleta ọdọ mmiri, ha na-amanye mmiri n'ụzọ zuru oke ma ghara ime ihe ọ bụla, n'ihi na ha na-ele anya dị oke mma ma ọ bụrụ na e mechapụrụ ha, mgbe ahụ, . N'ihe ejiji na-egbuke egbuke ma na pastel, ụlọ ndị inyom na-eji ejiji na "kọmpụ" na kọfị, na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha ọbara ọbara ga-adị mma, ma na-agbasapụ n'okpuru eriri ahụ ga-emezigharị obere adịghị ike nke ọnụ ọgụgụ ahụ.
Mma uwe mara mma
Kedu ihe eji ejiji ejiji maka ndị inyom na-eduzi ụdị oge ọhụụ?
Mpempe akwụkwọ dị ogologo ma dị mkpirikpi, bọtịnụ ma ọ bụ na-esi ísì ụtọ nke silk ma ọ bụ satin maka mmiri na ọkọchị, na ọbụna site na brocade ma ọ bụ velvet - maka ihu igwe oyi.
Ntughari na ntaneti-iyi, uwe ejiji, uwe ejiji, t-shirts-gowns, uwe-ejiji, tunics-gowns.
Ihe eji edozi ejiji: pritvannye akwa - na -emekarị nke ifuru, nke geometric, na nke usoro ethno; otu egwuregwu nke ọdịiche - ọtụtụ njikota agba na otu ngwaahịa; ihe nkedo nke aka, ihe ntinye akwa ma ọ bụ ihe ntinye aka na guipure, ngwongwo, ihe dị iche iche na-egbukepụ egbukepụ, ihe dị mma nke akpa, ego na ọnụ.
Uwe a na-ekpuchi n'ụlọ
N'ime oge dị iche iche a chọrọ dị iche iche, e nwere ụdị ejiji ejiji ejiji maka ụlọ - ihe ndị a na-esi ísì ụtọ, bụ ebe belt na-edozi ala. N'elu ọnụ ọgụgụ nke ewu ewu:
"Bat" nwere ogwe aka atọ na eriri elu ma ọ bụ ọkụ;
ụmụ nwanyị na-eji ejiji akwa na akwa uwe;
ihe na ogologo uwe agbanye;
ngwangwa free satin na mmebe mmebe.
Uwe a na-eji mara mma , nke e gosipụtara n'elu ala ụwa na nke onye edemede, dịka uwe ejiji na- adọrọ adọrọ, nke nwere ike ịghọ ezigbo isi maka ọtụtụ ụta kwa ụbọchị. Ha nile bu ihe okike na ihe di nma, ihe di iche iche, nke n'eme ka umunwanyi nke ihe obula choro iburu ihe ndi kachasi nma ha ma n'otu oge ha di nma n'ulo.
Ụdị ịkpụ na ụdị:
ejiji na-egbuke egbuke-uwe-elu, ịkwa iko, ma ọ bụ dịtụ ala; ụdị nke a na-ebipụta, nke a na-agbapụta site na eriri kwem na eriri ọkpọ na V neck neck;
ejiji ejiji na-enweghị uwe, na mgbakwunye snoo-a-Greek na free trapeze;
uwe umuaka nke ndi nwanyi na-eji ejiji nke ndi mmadu na-eji ejiji di iche iche;
ihe ejiji na-acha odo odo nke nwere ihe na-enweghị isi na ihe nkedo na jeans na bọtịnụ na-ebipụ.
Uwe ejiji na bọtịnụ
Ụdị uwe ejiji nke ụlọ nwere nke ọma na-adị mma na nke zuru oke maka ụlọ ọ bụghị nanị n'ihi na a na-esite ha n'ihe anụ ahụ, kamakwa n'ihi na ha nwere nguzo. N'ịmara nke ọma, ma ọ bụ ihe mmepụta ihe na mmụọ nke oge, ihe, ị nwere ike ịmalite ọrụ ọ bụla, ma n'otu oge ahụ na-enwe mmetụta dị ukwuu ma na-ele anya. Dị ọnụ ala karịa silk na ngwaahịa ndị ọzọ maka ụlọ ahụ, ọdịdị ahụ adịghị dị ala karịa ha. Na-echekwa uwe na mkpọchi, ebe ihe nkedo bụkwa ihe mmezi nke ihe ndozi ahụ, nakwa nke na-enweghị isi, ọdịdị nke uwe na T-shirt, ọnụnọ nke ngwa na iche ntinye.
Ime ụlọ obibi gowns na zipa
Isi ihe dị mma ga-abụ ebe obibi na uwe ejiji nke nwanyi na-eji ejiji, tinyere ihe ndị e ji ọkụ, owu na flan. Ọ bụrụ na ha ejiri obere nkọwa na ngwa dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, slippers mbụ, sọks, ntutu isi na ìgwè ntutu isi - ị ga-enweta ihe nlele na nke na-ese onyinyo nke nwunye nwanyị. Ha dị mma maka ọnụnọ nke nkedo na eziokwu ahụ na mkpirisi ha nwere ike ịbụ ụdị ọ bụla.
Ya mere, uwe ụmụ nwanyị na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka a na-etinye n'ụlọ a na-akwụ ụgwọ, dịka ihe nkwekọrịta dị n'úkwù ma ọ bụ n'úkwù, trapezoid na ngwọta nke ọhụụ. Tinyere ihe ndị dị egwu na-acha ọcha ma na-agba agba site na nwa, ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ na marsala, na uwe ndị na-eyi uwe na-acha nro na, na-atụle ihe odide nke ihe ahụ, na-enwe obere ohia ma ọ bụ na-adịghị adị.
Uwe ejiji ejiji ụmụ nwanyị
Otu akwa ejiji ejiji nke eji ejiji eji akwa akwa, akwa satin ma ọ bụ uwe ejiji - ezigbo uwe maka ụlọ na ngwụsị izu, na-achọ ihe dị mma na akwa ejiji ejiji, kimono gowns na ụdị nke anụ ahụ si n'úkwù ma ọ bụ Natasha Rostov. Na ejiji, ọ bụghị naanị ụmụ nwanyị na-eji ejiji na-esi ísì ụtọ, kama ha na-agbanye mgbidi, dị ka bọtịnụ, nkedo ma dozie otu ntutu isi ma ọ bụ abụọ.
Mgbe niile na-ele ihe anya n'ọchịchịrị, ma na-egbuke egbuke agba: bordeaux, nwa, ebili mmiri, karama na ihe ntanetị. Tụkwasị na ịma mma nke okike nke ihe dị nro nke kachasị mma, nke dị na kọfị na mmiri ara ehi, na mbara igwe, pearl na emerald agba, nontrivial - agba ntụ na agba chaa chaa, ma ọ bụrụ na e nwere ọdịiche dị iche iche na ejiji ejiji: belt, fringing, pursers, collars, ornament na ala nke uwe ejiji ma ọ bụ akwa.
Uwe eji ejiji nke ulo
Ulo ejiji ejiji n'elu ikpere bụ ihe dị mma ma dị mma maka uwe umunwanyi, ha anaghị egbochi ije ahụ, ha na-ekwe ka ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ ụlọ dị mma n'oge na-adịghị anya, ma n'otu oge ahụ mara mma ma na-elekwa anya. Ụdị ha yiri otu ụdị ogologo oge, ha jupụtara n'ụdị dịgasị iche iche ọ bụghị nanị nke ịkpụ, kama ọ bụkwa nke mmebe ihe ngosi.
Ọ bụrụ na ịme nhọrọ na ntụziaka maka nkwekọrịta zuru oke - ọ bara uru na-ele uwe na bọtịnụ zipa , ma ọ bụ bọtịnụ, ụdị ejiji elu, t-shirts na ejiji dị n'elu ikpere, ma ọ bụ obere uwe ejiji. N'ihi na ndị hụrụ glamor, ọbụna n'ebe obibi, ndị na-emepụta ejiji na-enye uwe, satin, guipure na silk deuces. Uwe uwe mpempe akwụkwọ mbụ nke eji akwa akwa akwa na-ele anya, e nwere ụdị ihe eji eme ihe, na ngwaahịa ndị nwere eriri na ogologo oge dị oke mma.
Ụmụ nwanyị na-eji mmiri na-ekiri oyi na-ekiri oyi - nhọrọ nke foto nke ụdị ejiji kachasị mma
Akpụkpọ anụ Denim
Nike ụkwụ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ grey
Ejikarị nwanyị Adidas
Uwe dị n'okpuru ikpere
Eva Longoria ghọrọ dọkịta nke sayensị n'ubi nkà ọma
Kedu ihe bụ isi, oleekwa ụkpụrụ anọ nke ngwa ya ị maghị?
Laryngotracheitis - mgbaàmà na ọgwụgwọ na ndị okenye
Ụzọ ị ga-esi na-adị ndụ: ihe nkiri vidiyo 16 ị na-amaghị
Kedu esi eji aka aka gị ịkwanye poufụ?
Ndị isi na mbara ihu
Kedu ihe ịchọta onwe onye nke mmadụ - usoro na usoro nke onwe-ya
Mmepụta nke nwa ahụ
E1442 - emerụ ma ọ bụ?
Anya umunwanyi nke nwanyi 2014
Kedu uru mmanụ aki oyibo bara?
Simoron's Usoro - ememe, pụtara na edinam
Kaadị ọhụrụ nke aka ha na ụmụ ha
Egwú maka September 1
Prolactin - iwu na ụmụ nwoke
Green iguana - iwu nke nlekọta ụlọ na nlekọta